Aqalka Cad Maraykanka Oo Kaadhka Aqoonsiga Ee Lagu Galo Kala Laabtay Weriyaha CNN Jim Acosta – somalilandtoday.com
Aqalka Cad Maraykanka Oo Kaadhka Aqoonsiga Ee Lagu Galo Kala Laabtay Weriyaha CNN Jim Acosta
(SLT-Washington)-Aqalka Cad ayaa kaadhka lagu galo kala laabtay wakiilka CNN ee Aqalka Cad saacado kaddib markii ay hadallo kulul is dhaafsadeen madaxweyne Donald Trump.
Xoghayaha warbaahinta Sarah Huckerbee Sanders ayaa sheegtay in weriyahan kaadhka lagu galo Aqalka Cad lagala laabtay, sababtuna ay tahay inuu u gacan qaaday gabadh dhalinyaro ah.
Gabadh ka tirsan shaqaalaha Aqalka Cad ayaa isku dayday inay makarafoonka ak qaaddo weriyaha, kaddibna Acosta ayaa diiday inuu u dhiibo isagoo ku yidhi “iga raalli noqo marwo”.
Trump ayaa kaddib ka tegay masraxa, kaddib wuu soo laabtay isagoo yidh: “CNN waa inay ceebsataa inaad adiga oo kale uu u shaqeyso. Waxaad tahay qof xun oo xaasid ah.” Wuxuu intaas ku daray: “Sida aad ula dhaqantay Sarah Huckerbee [xoghayihiisa warbaahinta] waa si qaab daran,” isagoo aan sababta sharrixin.
Muxuu Aqalka Cad yidhi?
Sanders, ayaa qoraal ay dhigtay barta Twitter-ka waxay ku sheegtay in Aqalka Cad uusan marna u dulqaadan doonin inuu weriyuhu u gacan qaado gabadh dhalinyaro ah oo isku dayeysay inay shaqadeeda qabsato.